EVY's Kitchen: Choco Fudge Brownies
ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနဂ်နွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလေးတွေပါ။ အချိုပွဲတွေထဲကတစ်ခုပေါ့။ အဲဒီနေ့က Brownies, Fruit Salad နဲ့ ကျောက်ကျောလုပ်ပါတယ်။ ကျောက်ကျောကတော့ ဟိုနေ့ကတင်လိုက်သေးတယ်။ ဒီBrownies ကတော့ သူငယ်ချင်း ဘိုဘို ရဲ့ အကြိုက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့ခမျာအဲဒီနေ့က မစားလိုက်ရပါဘူး။ ရုံး ပိတ်ရက် ဟင်းချက်နေရလို့ ဘယ်မှတောင် မသွားနိုင်ရှာပါတဲ့။ သူ့ကို FB မှာ Tag ပြီးနှိပ်စက်လိုက်ဦးမှ။ ဘိုဘို တစ်ယောက် ရှုံမဲ့ ပြီးလာအော်မှာ မြင်ယောင်ပါရဲ့။ :D :D
ဒီမုန့်လုပ်နည်းက အရင်ကလည်းရေးဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ ဒီတစ်ခါက သစ်သီးဆံလေးတွေပါထည့်ထားလို့ ပိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဖုတ်တဲ့ မုန့်တွေမပျက်တော့ အတော်ကို စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ အားလုံးပဲ မြည်းသွားကြပါဦး။
Posted by Evy at 10:19 PM
Brownie, brownie,brownie, I can't live without it. I always ask for brownie chocolate cake on every occasion. Thanks for sharing and wish I could bake.
Hi Evy, the brownie looks so chocolately and sinful :).
Hi Mon, yes I amabig fan of brownies too. The very first cake I made was brownies as well.
Hi Jess, they are really sinful but too delicious....oh I just love them,yum. Recipe from HHB.
wonderful cake, i amacake fan